RW Rooble oo kulamo siyaasadeed ka billaabay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Rooble ayaa magaalada Muqdisho ka billowday kulamo is daba joog ah oo uu la yeelanayo bulshada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Maxamed Xuseen Rooble ayaa u muuqada inuu ka soo baxay qolkii uu ku qunfulnaa ee Madaxtooyada Ku yaallay, kadib dhaqdhaqaaqyo nabadeed oo uu ka billaabay Caasimadda.
Rooble ayaa galinkii danbe ee Khamiistii shir muhiim ahaa Golaha Midowga Musharixiinta kula qaatay Huteel ku yaalla Garoonka Diyaaradaha ee Adan Cadde, halka uu galinkii danbe ee Jimcihii shalay uu qeyb ka mid ah bulshada kula kulmay Huteelka Jasiiro ee Magaalada Muqdisho.
“Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mohamed Hussein Roble ayaa Hoteelka Jazeera waqti kula qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada oo uu ka dhageystay aragtiyo ku aaddan xaaladda dalka”. Ayaa lagu yiri qoraal gaaban oo lau dul qoray muuqaalka Rooble oo ku sugan Jasiira Hotel.
Kulamada Rooble billaabay waxaa lagu sheegay in ay yihiin kuwo uu ku doonayo inuu ku dhageysto aragtida bulshada iyo waxa ka dhex guuxaya shacabka iyo siyaasiyiinta Muqdisho oo uu isagu hayo xilka ugu sarreeya ee lagu matalo qeyb ahaan.
Keydmedia Onlne ayaa fahansan in Rooble ay cadaasis xooggan saaraty Beesha Caalamka bartamihii Isbuucii hore, waxaana lagu amray in uu iska feydo daaha indhaha ka saran, kana gudbo darbiga lagu gadaamay ee aan xaqiiqda ku saleysneyn.
Rooble waxaa lagu booriyay in uu qaato doorkiisa, kana shaqeeyo qabashada doorasho loo dhan yahay oo waafaqsan heshiiskii 17 September 2020 ee ka dhacay Xamar, maadaama uu isagu yahay qof aan eed gooni ah loo heysan, sharcigu u ogol yahay inuu sii hayo xilka inta laga helayo Xukuumad baddasha.
Guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho, si weyn ayay u soo dhaweeyeen is baddalka aan buurneyn ee Roobel sameeyay 60-kii saacadood ee la soo dhaafay waxayna ku baaqeen in uu halkiisa kasii socdo oo dhaqanka Fahad iyo Farmaajo uu meel iska dhigo.
KON, waxa ay xasuusataa doorkii uu xilligii kala guurka Dowladdi KMG ee Cabdullahi Yuusuf ka qaatay AUN RW Nuur Xasan Xuseen ‘Nuur Caade’ kaas bulshada reer Muqdisho ugu qoran baal dahab ah, waxaana shacabku Rooble kala taliyeen inuu qaado jidkii Nuur Cadde maray kana fogaado wadadii Cali Geeddi qaaday ee madoobeed.